श्रीमती बिना बाँच्ने आँट किन नगर्ने ? |
प्रकाशित मिति :2020-03-10 12:36:42
केही महिना अगाडिको कुरा हो । अफिसको काम विशेषले गर्दा त्यस दिन म अलि ढिला घर पुगेको थिएँ । घर पुग्दा मेरो छिमेकीको घर छेउको बाटोमा पार्किङ्ग केही बाक्लिएको थियो । चहल पहल पनि अघिपछिको भन्दा अलि बढी नै थियो । त्यो घरको छिमेकी दिदी एक हप्ताको लागि बुटवल जान्छु भन्नु भएको थियो । दिदीको आफ्नै काम थियो रे बुटवलमा ।
दिदी नभएको बेला घरमा अलि बढी घुँईचो देखेर केही परेछ कि भनेर म अलि झसङ्ग पनि भएँ । म घरको गेटभित्र छिर्नै लाग्दै थिएँ । छिमेकी दाई र उहाँको साथीसँग टुप्लुक्क भेट भयो । मैले पनि सोधि हाले ‘के छ दाई घरमा आज त निकै चहलपहल देख्दैछु ?’ दाई मौन बस्नुभयो । उत्तर उहाको साथीले दिनुभयो । ‘आज उहाँको श्रीमती बुटवल माईत जानुभयो । त्यसैले यसो साथीभाईसँग बसेर रमाईलो गरेको !’ मैले ए भने । बढी बोल्न उचित ठानिन । सरासर आफ्नो घरभित्र छिरे ।
घरको गेट त मैले राम्रैसँग लगाए । तर दाईको साथीले दिएको उत्तरले मलाई राम्रोसँग बस्न दिएन । मलाई कताकता चसक्क भयो । आज श्रीमती माईत गएको दिन उहाँलाई यत्रो उत्सव मनाउनुपर्ने । लोग्ने मानिसलाई श्रीमती यस्तो बोझ पो हुँदो रहेछ । मेरो मनमा धेरै प्रश्नहरू खेल्न थाले । छिमेकी दाई आफै पनि कामको सिलसिलामा धेरै चोटी घरबाहिर जानु भएको मैले देखेको छु । तर उहाँ गएको खुशीयालीमा दिदीले आफ्ना साथी बोलाएर रमाईलो गरेको मैले देखेकी छैन ।
यो त मैले प्रत्यक्ष देखेको एउटा सानो घटना थियो । तर सामाजिक संजालमा श्रीमती हुँदाको क्षण र नहुँदाको क्षण, बाहिरका केटीहरू त लजालु हुन्छन् । तर घरभित्रकै श्रीमतीचाहिँ किन यती कर्कसा ? बाहिर त मसँग सबै डराउछन् । तर घरमा आएरचाहिँ म श्रीमती सँग डराउनुपर्ने । आदि ईत्यादी व्यंग्यात्मक र श्रीमती बोझकै रुपमा रहेको भन्ने आभास हुने खालका पोष्टहरू त दैनिकजसो देखी नै रहन्छन् । योबाहेक नेपाली चलचित्र, टेलिश्रृंखला र संचार माध्यमबाट प्रसारण हुने बिज्ञापन आदिले पनि यस कुरालाई अलि बढी नै स्थान दिएको पाईन्छ । चलचित्र छक्का पञ्जाका कलाकार बुद्धिबहादुर तामाङ्गलाई त उनको साथीहरूले जोइटिंग्रे अर्थात ‘जेटी’ नै संज्ञा दिएका छन् ।
सामान्यतया हाम्रो परिवेशमा श्रीमान्् घर छोडेर केही दिनको लागि बाहिर जाँदै छन् भने श्रीमतीहरूले उसलाई कति साह्रो याद गरिरहेका हुन्छन् । आफ्नो श्रीमान्लाई मन पर्ने खानेकुरा पाक्दा सम्झिएर फोन गर्छन् । उ आउने दिन गन्दै औंला भाँचेर बस्छन् । र उसलाई मन पर्ने परिकार बनाएर उसको स्वागत गरिरहेका हुन्छन् ।
यसरी बुझ्दा यो सम्बन्ध एकदम जटिल र सोचनीय छ । जब एउटा श्रीमान्ले श्रीमती घरमा नभएको दिन निकै स्वतन्त्र महसुस गरी साथी भाई जम्मा पारेर ह्विस्की पिउनाई रमालो मान्छ भने एउटी श्रीमती श्रीमान्सँगै बसेर चिया पिउन पाउँदालाई रमाईलो मान्छे ।
मैले बा ‘भन्ठाने’ कि भन्ने सोचेर केही केटा र केटी साथीलाई प्रश्न गरेँ । के साँच्चिकै श्रीमती नभएको बेलामा तिमीहरू स्वतन्त्र महसुस गर्दछौ ? उनीहरूले हाँस्दै जवाफ दिए, ‘त्यस्तो त हैन । तर किचकिच कम हुन्छ ।’ अनि मैले फेरि प्रतिप्रश्न गरें, ‘के विषयसँग सम्बन्धित किचकिच हो त्यो ?’ उनीहरूको उत्तर थियो, ‘त्यस्तै त होनी किन अबेर गरेको ? कोसँग बसेको त्यस्तै त्यस्तै !’
त्यसो भए त्यो किचकिच केका लागि हो ? कसका लागि किन गरिएको हो ? धेरै नपिउनुस् । रातिसम्म घरबाहिर नबस्नुस् । शरीरको ख्याल गर्नुस् । बिरामी पर्नु होला भन्ने किचकिच के श्रीमतीले आफ्नो स्वार्थको लागि गरेकी हुन् । वा श्रीमान्को हितको लागि ? र मेरा केटी साथीहरूको निष्कर्ष पनि त्यही आयो ‘साथीसँग बसेर ह्विस्की पिउनु भन्दा श्रीमान्सँग बसेर चिया पिउँदा खुशी दोब्बर हुन्छ ।’
अनि मलाई लाग्यो श्रीमती घरमा नभएको बेला स्वतन्त्र महसुस गर्ने र बोझको रुपमा हेर्ने केटा मान्छेहरूले पुरै जिन्दगी श्रीमतीविना बिताउने आँटचाहिँ किन गर्दैनन् ?
श्रीमतीको मृत्यु पश्चात चाँडै अर्को बिहे गर्ने केही व्यक्तिहरू उदारणका रुपमा आए पनि नचिनिएका सामान्य मानिसहरू धेरै छन् समाजमा । जसले श्रीमतीको मृत्यु वा सम्बन्ध विच्छेद पछि तुरुन्तै अर्को विवाह गरिहालेका हुन्छन् । तिनीहरू फेरि किन सकिएको बोझ अर्को पटक उठाउन तयार हुन्छन् ? किन जोड्न खोज्छन् अर्को नाता ? किन उठाउन खोज्छन् अर्को बोझ ? अर्को किचकिच ?
हाम्रो समाजलाई राम्रोसँग नियालेर हेर्यो भने कतिपय महिलाहरू विवाह नै नगरी कुनै पुरुषको साथविना आफ्नो पाखुरा र पौरखले बाँचिरहेका छन् । बाँच्नकै लागी उनीहरूलाई कुनै पुरुषको आवश्यकता परेको छैन ।
अर्को कुरा श्रीमान्को मृत्यु भएपछि विधवा महिलाको बिल्ला भिरेरै पनि आफ्नो परिवार सम्हालेर बसिरहेकै छन् । तर यही समाजका पुरुषहरूलाई हेर्ने हो भने कुनै कारणवस् श्रीमतीको मृत्यु भयो भने उनीहरू केही महिना त के केही दिन पनि बित्न नपाउँदै अर्को श्रीमतीको खोजीमा हुन्छन् र बिहे पनि गरिहाल्छन् ।
यो सबै कुराहरूलाई राम्रोसँग विष्लेषण गर्दै जाने हो भने पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचनाले महिलालाई दिएको कमजोर स्थानले निम्त्याएको कारण यस्ता घटनाहरू देखिएको भन्न सकिन्छ ।
श्रीमतीलाई एउटा जीवनसाथी भन्दा पनि घरमा काम गर्ने बेतलवी कामदारको दर्जामा हेरिने पितृसत्तावादी मनस्थीतिले गर्दा नै श्रीमतीहरू बद्नाम छन् ।
सम्बन्धलाई बुझ्न नसक्दा एकको अनुपस्थितिमा खुसी मनाउनु पर्ने दिन आउँछ भने सम्बन्धलाई सधैँका लागि बन्द गर्ने हिम्मत गर्न सक्नु पर्छ । र श्रीमतीले गरेको अनुरोध र ख्याललाई बोझ ठान्ने प्रत्येक पुरुषले जिन्दगी भर विवाह नगरी स्वतन्त्र जीवन बिताउने आँट गर्नु पर्छ ।